Kooxaha Premier League Oo U Codeynaya Isticmaalka VAR Ee Xili Ciyaareedka Soo Aadan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxaha Premier League Oo U Codeynaya Isticmaalka VAR Ee Xili Ciyaareedka Soo Aadan
(14-4-2018) Kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League oo marar soo gudbiyay cabasho ka dhan ah aalada garsoorka caawisa ee VAR ayaa maanta bilaabay codeynta aaladaasi taa ku aadan hadii xili ciyaareedka soo aadan ciyaaraha England laga hirgalin doono qalabkaasi.
Xiriirka FA-ga dalka England ayaa sanadkan tartamada laga ciyaaro dalkaasi ka hirgaliyay aalada VAR, waxaana isticmaalka qalabkaasi ka dhashay is fahan daro iyo go’aamo laga gaaray goolal u muuqday kuwo si sax ah u dhashay.
Ciayar ka tirsaneyd FA Cup-ka oo ay wada ciyaareen Liverpool iyo West Brom ayaa waxaa ku yimid dib u dhac badan inta ay ciyaartaasi socotay, tababaraha Reds ayaana kadib kulankaasi sheegay in aalada VAR.
Tababarayaal fara badan oo ka howl gala Premier League ayaa fikrado kala duwan ka dhiibtay isticmaalka aaladan ku cusub saaxada kubada cagta, macalimiin ay ku jiraan Mourinho, Guardiola iyo Conte ayaa qaba in qalabka VAR gabi ahaan aysan ku habooneen in laga isticmaalo England.
Aalada VAR ayaa horay looga horgaliyay horyaalada Serie A iyo Bundesliga, laakiin kooxaha Premier League ayaa go’aan rasmi ah ka gaarin isticmaalka aaladaasi koox walba oo ka ciyaarta horyaalka England ayaa la siin doonaa codkeeda ku aadan isticmaalka qalabka VAR.
Ugu danbeyn VAR ayaa laga isticmaali doonaa koobka aduunka 2018,halka horyaalada dalalka Spain iyo Holland xili ciyaareedka soo aadan laga hirgalin doono.